Irreechi baranaa 'akka duraanitti' nama hunda hirmaachisee kabajama | OROMOTV
Irreechi baranaa ‘akka duraanitti’ nama hunda hirmaachisee kabajama
By Urjii / September 14, 2021 September 14, 2021
Irreechi baranaa ‘akka duraanitti’ nama hunda hirmaachisee kabajama – Abbaa Gadaa
(BBC Afaan oromoo)”Akka duraaniitti, odoo waan tokko keessaa hin hafiin, qeerroon qarreen, jaarsaa jaartiin haa irreeffatu kan jedhu murteessiine,” jechuun Abbaan Gadaa Tuulamaa fi barreessaan Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa BBC’tti himan.
Waan shan waa’ee Irreecha bara 2019
‘Alaabaan paartii siyaasaa kamuu Irreecha akka seenu hin barbaannu’
Kabaja Ayyaana Irreechaan wal-qabatee yaaddoon nageenyaa fi Covid-19 jiraachuu kan himan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa, dhimma nageenyaa qaama dhimma nageenyaatiif, dhimma Covid-19 ammoo biirolee fayyaa magaalaa Finfinnee, Oromiyaa fi Federaalaatti kennineerra jedhan.
Weerarri koronaavaayirasii tibbana Itoophiyaa keessatti akkaan dabalee jira. Guyyaa kaleessaa qofa namootni 37 dhukkuba Covid-19n kan du’an yoo ta’u, kunis lakkoofsa namoota du’anii isa olaanaadha.
“Uummatni dhimma weerara kanaarratti hubannoo akka argatu, maal gochuu akka qabu ibsa akka argatu biiroolee fayyaatti kennineerra,” jedhan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa.
“Kan bar-dheengaddaa hanga dhukkubichi mataafi miilli beekamuutti, hanga wanti ija dura of qaban baramuutti, hanga uummata biratti xiyyeeffannoo argatutti” jedhamee namoota muraasaan akka kabajamu murtaa’e jedhan.
Irreecha Finfinnee bara kanaa irratti namootni miliyoona 10 ta’an irratti argamu jedhanii akka eeganis Abbaan Gadaa himaniiru.